ခင်မင်းဇော်: ဘ၀ဒိုင်ယာရီ အပိုင်း ၂ ၊ အခန်း (၉)
I am always come and read to your blog but i could not write my comment because i have no idea. I like very much your posts especially your life diary pls pls go ahead whoever say whatever. Long time i was waiting for your life diary. Last week i could not come because i went to travel.
ဘသဒိုင်ယာယီကို လာဖတ်သွားပါတယ်။ ပိုက်ဆံပေးပြီး ၀ယ်လို့မရနိုင်တဲ့ ဘ၀ပေး အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည်မျှဝေတာ ကျေးဇူးပါ။
ဟုတ်တယ်နော် အမရေ .
ထောင်ထဲမှာ ရှိသူတိုင်းဟာ လဲ တကယ့်ဆိုးသွမ်း ရမ်းကားနေသူ တွေ မဟုတ်ကြပါဘူး . . နွမ်းပါးချို့ တဲ့ နေရတော့ လုပ်မိလုပ်ရာ အဆင်ပြေသလို လုပ်ပြီး တဝမ်းတခါး နဲ့မိသားစု အတွက် ဘဝတခုလုံး ပေးဆပ်လိုက်ကြသူတွေ အများကြီးပါဘဲ ....
ဒီလို ကိုယ်တွေ့ လေးတွေ သိရတာ ၊ ဗဟုသုတ ရပါတယ်။
စောင့်ဖတ်နေပါတယ် ...အဟောင်းလေးတွေ လဲ တဖြေးဖြေးချင်း အချိန်ယူ ဖတ်အုံးမယ် ..
ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝပါစေ ...
အမရေ ဘ၀ဒိုင်ယာရီ ဖတ်မိပြီး အမဘလော့ဂ်ကို ရောက်ရတာ... ဆက်ရေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘ၀တသက် မမမေ့နိုင်စရာ အကြောင်းတွေနော်
အမရေ..တကယ့် အထဲက အဖြစ်အပျက်မှန်တွေကို အပြင်က လူတွေ သိဖို့ မလွယ်ပါဘူး..ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ..
အန်တီရေ အထဲမှာနေခဲ့တုန်းက ခင်ညွန့်ပုံ အိမ်ထိပ်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ အင်း ကို ၀င်ဖမ်းတဲ့ မိန်းမလေးတွေနဲ့ ရက်ပိုင်း လောက် သီးသန့်မှာ အတူ ထား ခံ ထိ လိုက်တယ်. သူတို့တွေ ဘ၀တွေလဲ တော်တော်လေး သနားပါတယ် ရောက်ခါစ ကတော့ မော်နေတာပဲ နောက် ထောင်မကြီးလည်း ရောက်သွားတော့ တော်တော်လေး သနားဖို့ကောင်းတယ် အိမ်အတွက် လုပ်တာပါဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတွေ များတယ်.. ဟုတ်တယ်နော် ...
ခွေးပေါက်စလေးတွေမွေးရင် သဘောကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ ခွေးသားအုပ်မကြီးတောင် အကြည့်မခံပဲ လိုက်ကိုက်တာပဲနော်..အဟိတ်တရိစ္ဆာန်မှာတောင် သားသမီးစိတ်မွှန်လာရင်..ဒေါသစိတ်ကပ်လာသေးတာပဲ။.... စိတ်မကောင်းဘူး ပို့စ်လေးဖတ်ပြီးတော့..
ဟုတ်တယ်နော်..အမ.. လူ့အဆောက်အဦ တခုမှာ..ဘယ်လိုမှ မညီ နိုင်လို့.. မတူတဲ့ အလွှာတွေ ရှိနေကြပေမဲ့..အလွှာတိုင်း အတွက်.. သင့်တော်တဲ့ နေရာ တွေ ရှိသင့်တယ်။
ဥပမာ..ဆိုပါတော့.. ဒီဖက်မှာမြင်ဖူးတာတွေ.. လူစဉ်မမှီ တဲ့ လူတွေ ကိုတောင်..အလုပ်လုပ်နိုင်ရင်.. သင့်တော်ရာ အလုပ် အထူးစီမံပေးနိုင်တာမျိုး။ တကယ့်တကယ်ကျ..ကျမတို့နိုင်ငံလို..ဆင်းရဲ ပြီး.. ချမ်းသာ မူတွေ လည်း မတရား ဖောင်းပွ နေတဲ့.. နေရာမျိုးမှာ.. ညငှက်ပြသာနာ က.. silent killer ပဲ။
( ရှည်သွားမိပီ..လျှာ ) :D
လူတွေရဲ့ အခြေခံစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ရာဇ၀တ်မှု တော်တော်လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံမရှိတဲ့အခါ တန်ဘိုးမရှိလှတဲ့ ထီး၊ ချိုင့်၊ နေလှန်းထားတဲ့အင်္ကျီကအစ ခိုးချင်ဝှက်ချင်ကြတာပေါ့။
မလေးရှားလောက်၊ ထိုင်းလောက် စီးပွားရေးအဆင့်အတန်းလောက်ရှိမယ်ဆိုရင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ ဘာသာတရားနဲ့ပါ ထည့်တွက်ရင် ရာဇ၀တ်မှု တော်တော်နည်းပါးသွားနိုင်ပါတယ်။
မ ရေ… ဒီပို့ စ်ရဲ့အနှစ်က…
“ဒီလိုလူတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာ လူတိုင်းမှာ အကောင်းချည်းမရှိနိုင်သလို သိပ်ဆိုးပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေမှာတောင်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေ ရှိပါလားဆိုတာ ပိုပြီး ထင်ထင်ရှားရှား မြင်ခဲ့ရတယ်။”
အပေါ်က စာသားလေးပါပဲ… ကျွန်မငယ်ငယ်က ၀တ္ထုဖတ်ဖတ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြည့် ဗီလိန်ဆို သိပ်မုန်းတာ… နဲနဲကြီးလာတော့ သူတို့ နောက်က သမိုင်းကြောင်း မဟုတ်တာလုပ်ဖြစ်အောင် တွန်းပို့ ပေးတဲ့ အခြေအနေကို ပိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်… ဒါလေးဖတ်ပြီး ကျွန်မတွေ့ ခဲ့ဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက် အကြောင်းကို ရေးဖို့ သတိရသွားတယ်… အူမတောင့်ပြီး သီလစောင့်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို မြန်မြန်ရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းမိတယ် မ ရယ်…
အခုမှ ဒီတပုဒ်ကို ဖတ်မိတယ်။
ဟုတ်တာပေါ့။ စနစ်ဒဏ်ကို ခါးစည်းခံရရှာတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတွေလဲ ဒီခေတ်မှာ အများသားပေါ့။
အမအတွေ့အကြုံ ဘ၀ဒိုင်ယာရီကို စာအုပ်လုပ်ပါ အမရေ။